Abalawuli be-Acidity Suppliers kunye neFektri | I-China Acidity Regulators Abavelisi
I-Fumaric acid, ekwabizwa ngokuba yi-fumaric acid, fumaric acid, purpuric acid okanye lichenic acid, yikristale engenambala, enokutsha, i-carboxylic acid ethathwe kwi-butene. I-asidi ye-Fumaric iyakuthanda iziqhamo kwaye inokufumaneka eCorydalis, Boletus, Lichen kunye ne-Icelandic seaweed. Ukupakisha: 1kg / ingxowa, 25kgs / igubu (ezimbini zeplastikhi-iingxowa ngaphakathi kunye nePhepha-igubu okanye ngokweemfuno zabathengi.) Ukugcina: Gcina kwizingxobo ezixineneyo, ezinganyangekiyo, kuthintele ukubekwa elangeni ngqo, ukufuma kunye nobushushu obugqithisileyo. Shel ...
I-Malic acid yindibaniselwano yendalo kunye nefomula yeemolekyuli C4H6O5. Inegalelo kwincasa emnandi emuncu yeziqhamo, kwaye isetyenziswa njengesongezo sokutya. I-Malic acid ineefom ezimbini ze-stereoisomeric (L- kunye ne-D-enantiomers), nangona kuphela i-L-isomerom ikhona ngokwendalo. I-Malic Acid ine-hygroscopic eyomeleleyo, inyibilikayo emanzini kunye ne-ethanol. Kukho asidi ekhethekileyo emnandi. I-1.Malic Acid incasa isondele kwii-apile zendalo ezimuncu, xa kuthelekiswa ne-citric acid, kunye ne-asidi, incasa kunye nokuthamba, ukuhlala ixesha elide ...
I-Acidity Regulator BP98 yeBanga leCrystalline Powder 99% min iSodium Citrate
Ubungakanani Particle: 12-40mesh, 30- 100mesh ukutya grade BP98 / usp Ukupakisha: 25kg / ibhegi ubomi Ubude bethuba: iminyaka emi-2 Packaging & Shipping Packaging: 25kg / ingxowa, 25mt / 20'FCL Lead Ixesha: iintsuku ezili-10 emva kokufumana prement Sodium citrate yi Isetyenziselwa ukwandisa incasa kunye nokugcina uzinzo kwizithako ezisebenzayo ekutyeni nakwisiselo kwishishini lesepha, inokuthi ithathe indawo yesodium tripolyphosphate njengohlobo lwesepha ekhuselekileyo inokusetyenziswa ekuvuseleleni, inaliti, ukufota kunye nentsimbi. (1) Kushishino lokutya: ...
I-Tartaric acid yicrystalline organic acid eyenzeka ngokwendalo kwizityalo ezininzi, ikakhulu kwimidiliya. Ityuwa yayo, i-potassium bitartrate, eyaziwa njenge cream ye tartar, ikhula ngokwendalo kwinkqubo yokwenza iwayini. Ihlala ixutywe nesodium bicarbonate kwaye ithengiswa njenge powder yokubhaka esetyenziswa njengegwele xa kulungiswa ukutya. I-asidi ngokwayo yongezwa kukutya njenge-antioxidant kunye nokuhambisa incasa yayo eyahlukileyo emuncu. Ukupakisha kunye nokuhambisa ngenqanawe: 25kg / ibhegi, 20mt / 20 & ...
IGlycine (efinyeziweyo iGly) ikwabizwa ngokuba yi-amino-acetic acid. Ifomula yayo yamachiza yiC2H5NO2, emhlophe eqinileyo kubushushu begumbi kunye noxinzelelo. Yi-amino acid enesakhiwo esilula kuthotho lwee-amino acid kwaye ayimfuneko kumzimba womntu. I-Glycine luhlobo lwee-amino acid ezingabalulekanga kumzimba womntu. Amagama afinyeziweyo: I-Gly sesona silula silula i-amino acid, umzimba awufuneki i-amino acid, zombini asidi kunye namaqela asebenzayo kwimolekyuli, ...
ICitric Acid Monohydrate / iCitric Acid engena emzimbeni
I-Citric Acid isetyenziswa ikakhulu njenge-arhente yokunambitha, ukubola kwishishini lokutya kunye nesiselo. Ikwanokusetyenziswa njenge-antioxidant, iplasticizer, isepha kwimichiza, izithambiso nakwimizi mveliso yesepha. Njengokongezwa kokutya, iCitric Acid Monohydrate sisixhobo esibalulekileyo sokutya ekunikezelweni kokutya. Njengesongezo sokutya esikhokelayo kunye nomthengisi wezithako zokutya e-China, sinokubonelela ngomgangatho ophezulu weCitric Acid Monohydrate. Ukugcinwa kwe-9 kunye nezoThutho: Ifanele igcinwe kwindawo eyomileyo kunye ne-ventilative w ...